တစ်နှစ်လောက်မဖျက်ပဲထားခဲ့တဲ့ Justin နဲ့ နောက်ဆုံးသော စုံတွဲပုံကို Instagram ကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ Selena Gomez – Swel Sone News – NEW VPS
Home > Cele
တစ်နှစ်လောက်မဖျက်ပဲထားခဲ့တဲ့ Justin နဲ့ နောက်ဆုံးသော စုံတွဲပုံကို Instagram ကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ Selena Gomez
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလိုက်ဖက်ဆုံးစုံတွဲတွေလို့ ပရိသတ်တော်တော်များများလက်ခံခဲ့ကြတဲ့ Justin Beiber နဲ့ Selena Gomez တို့စုံတွဲကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းစေချင်ကြမှာပါ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်လျက်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာ ယနေ့ချိန်ထိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပြောစမှတ်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
WEST HOLLYWOOD, CA – FEBRUARY 27: Singer/actress Selena Gomez and singerJustin Bieber arrive at the Vanity Fair Oscar party hosted by Graydon Carter held at Sunset Tower on February 27, 2011 in West Hollywood, California. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
171788, Selena Gomez and Justin Bieber have great fun cruising around on their bikes together in Los Angeles. Los Angeles, California – Wednesday November 1, 2017. Photograph: © Miguel Aguilar, PacificCoastNews. Los Angeles Office (PCN): +1 310.822.0419 UK Office (Avalon): +44 (0) 20 7421 6000 [email protected] FEE MUST BE AGREED PRIOR TO USAGE
မော်ဒယ် Hailey Baldwin နဲ့ Justin လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့်လည်း Selena တစ်ယောက် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးရုံတက်ရသည်ထိ ပြိုလဲခဲ့ရသလို Selena ကြောင့် ငိုနေတဲ့ Justin ကို နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ Hailey က ပြန်လည် နှစ်သိမ့်ပေးရတဲ့ထိ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း အဖုအထစ်တချို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိ ဖြစ်ပါတယ်။
EXCLUSIVE: Justin Bieber seemed visibly upset today as he and fiance, Hailey Baldwin rode Citibikes up the West Side of Manhattan. Hailey did her best to comfort Justin, and at one point their heads were touch for so long that it seemed as if the newly engaged couple might have been praying. Whatever it was, it seems to have worked because the pair eventually git back on their bikes and rode away with smiles on their faces. 07 Aug 2018 Pictured: Justin Bieber, Hailey Baldwin. Photo credit: MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 (Mega Agency TagID: MEGA260623_010.jpg) [Photo via Mega Agency]
ချစ်သူသက်တမ်း(၈) နှစ်သက်တမ်းရှိခဲ့တဲ့ အချစ်ဟောင်း Justin ကို မမေ့နိုင်ပဲ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ Selena ဟာ (၂၀၁၈)ခုနှစ် ၊မတ်လ(၁)ရက်နေ့ မှာ Justin အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း post ကို မဖျက်ပဲ (၁) နှစ်ဝန်းကျင်လောက် ထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး “March 1, 1994 someone I knew that happens to be super cool was born. Boom.” လို့ Caption တပ်ထားတဲ့ Justin အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းမှာ Justin ဓာတ်ပုံကို နဖူးပေါ်တင်ပြီး အားပါရတ ပြုံးကာ နောက်ကိုမှီနေတဲ့ပုံလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Selena ရဲ့ Instagram မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ Justin နဲ့ နောက်ဆုံးသော စုံတွဲပုံလေးဖြစ်ပြီး ဒီပုံလေးကို နောက်ဆုံးမှတော့ာ Selena တစ်ယောက် ဖျက်ချပစ်လိုက်ပြီး ချစ်သူဟောင်း Justin Bieber ကို လုံးဝမေ့ပစ်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပုံပါပဲ…။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးကော Justin နဲ့Selena ကို ပြန်တွဲစေချင်ရဲ့လား..ဖြေသွားကြပါဦးနော်။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အလိုကျဖကျဆုံးစုံတှဲတှလေို့ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားလကျခံခဲ့ကွတဲ့ Justin Beiber နဲ့ Selena Gomez တို့စုံတှဲကို ပွနျလညျပေါငျးစညျးစခေငျြကွမှာပါ။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ခဈြလကျြနဲ့ လမျးခှဲခဲ့တဲ့ သူတို့စုံတှဲလေးရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးဟာ ယနခြေိ့နျထိ ပရိသတျတှကွေားမှာ ပွောစမှတျပွုနဆေဲဖွဈပါတယျ။
မျောဒယျ Hailey Baldwin နဲ့ Justin လကျထပျလိုကျပွီဆိုတဲ့ သတငျးကွောငျ့လညျး Selena တဈယောကျ စိတျကနျြးမာရေးအတှကျ ဆေးရုံတကျရသညျထိ ပွိုလဲခဲ့ရသလို Selena ကွောငျ့ ငိုနတေဲ့ Justin ကို နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ Hailey က ပွနျလညျ နှဈသိမျ့ပေးရတဲ့ထိ အိမျထောငျရေးမှာလညျး အဖုအထဈတခြို့ ဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ထိ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသူသကျတမျး(၈) နှဈသကျတမျးရှိခဲ့တဲ့ အခဈြဟောငျး Justin ကို မမနေို့ငျပဲ ရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ Selena ဟာ (၂၀၁၈)ခုနှဈ ၊မတျလ(၁)ရကျနေ့ မှာ Justin အတှကျ မှေးနဆေု့တောငျး post ကို မဖကျြပဲ (၁) နှဈဝနျးကငျြလောကျ ထားရှိခဲ့တာဖွဈပွီး “March 1, 1994 someone I knew that happens to be super cool was born. Boom.” လို့ Caption တပျထားတဲ့ Justin အတှကျ မှေးနေ့ ဆုတောငျးမှာ Justin ဓာတျပုံကို နဖူးပျေါတငျပွီး အားပါရတ ပွုံးကာ နောကျကိုမှီနတေဲ့ပုံလေး ဖွဈပါတယျ။ Selena ရဲ့ Instagram မှာ ကနျြရှိနတေဲ့ Justin နဲ့ နောကျဆုံးသော စုံတှဲပုံလေးဖွဈပွီး ဒီပုံလေးကို နောကျဆုံးမှတော့ာ Selena တဈယောကျ ဖကျြခပြဈလိုကျပွီး ခဈြသူဟောငျး Justin Bieber ကို လုံးဝမပေ့ဈဖို့ စိတျကူးလိုကျပုံပါပဲ…။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးကော Justin နဲ့Selena ကို ပွနျတှဲစခေငျြရဲ့လား..ဖွသှေားကွပါဦးနျော။
ပြင်သစ်မှာ အပေါ့သွားထားတဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခံရပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ Song အမြွာ(၃)ယောက်
ချစ်စရာမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ကာ ဗမာစကားဖြင့် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသူလေးနှစ်ယောက်
မြန်မာ့သနပ်ခါး ကို မြန်မာသီချင်းလေးနဲ့ နိုင်ငံတကာကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ဗီယက်နမ်အဆိုတော်လေး
ယနေ့ည လေဆိပ်မှာ လာရောက်ကြိုဆိုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ F4 မင်းသမီးလေး ဂင်ဂျန်ဒီ
ပထမအကြိမ် ကိုရီးယား-မြန်မာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာဖို့ ရင်ခုန်နေတဲ့ F4 မင်သမီးလေး ဂင်ဂျန်ဒီ